Jeremia 36 - Ny Baiboly
Jeremia toko 36
Ny nandoroan'i Joakima ny horonan-taratasy misy ny faminanian'i Jeremia - Notononin'i Jeremia tamin'i Baròka ny faminaniany, hosoratany - Dia novakin'i Baròka tao amin'ny tempoly izany - Fa nasain'i Joakima nodorana ny taratasy - Nefa nasain'Andriamanitra nataon'i Jeremia fanindroany indray.
1Tamin'ny taona fahefatra, nanjakan'i Joakima, zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà, dia izao no teny avy any amin'ny Tompo, tonga tamin'i Jeremia: 2Mangalà horonan-taratasy hianao, ka soraty ao avokoa ny teny nolazaiko taminao, mamely an'Isaely sy Jodà ary ny firenena rehetra, hatramin'ny andro nitenenako taminao, hatramin'ny andron'i Josiasa ka mandrak'androany. 3Fa angamba dia hohenoin'ny taranak'i Jodà ny loza rehetra kasaiko hatao aminy, mba hiovany, hialany amin'ny làlan-dratsiny avy, ka hamelako ny helony amam-pahotany. 4Dia niantso an'i Baròka, zanak'i Nerià, Jeremia, ka ny teny rehetra nolazain'ny Tompo tamin'i Jeremia, dia nosoratan'i Baròka tamin'ny horonan-taratasy araka ny nanononany azy. 5Rahefa izany, nanome didy an'i Baròka Jeremia, nanao hoe; Izaho ity, voasakana, ka tsy afa-mankany an-tranon'ny Tompo. 6Ka mandehana ary hianao, ary vakio ao amin'ny horonan-taratasy nosoratanao, araka izay nanononako azy, ny tenin'ny Tompo mba ho ren'ny vahoaka ao an-tranon'ny Tompo amin'ny andro fifadian-kanina; vakio izany ho ren'izay rehetra an'i Jodà izay tonga avy any an-tanànany. 7Angamba ho tonga eo anatrehan'ny Tompo ny fifonany, ary hiova hiala amin'ny làlan-dratsiny avy izy; fa lehibe ny hatezerana amam-pahavinirana nolazain'ny Tompo hahatra amin'ity vahoaka ity. 8Dia nataon'i Baròka, zanak'i Nerià, avokoa, izay nandidian'i Jeremia mpaminany azy; novakiny tao an-tranon'ny Tompo, tao amin'ny horonan-taratasy ny tenin'ny Tompo.
9Tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Joakima, zanak'i Josiasa mpanjakan'i Jodà, tamin'ny volana fahasivy, dia nisy fifadian-kanina nantsoina teo anatrehan'ny Tompo hataon'ny olona rehetra ao Jerosalema, sy ny olona rehetra tonga tao Jerosalema, avy any amin'ny tanànan'i Jodà. 10Ary novakin'i Baròka tamin'izay, tao amin'ny boky ny tenin'ny Tompo, tao an-tranon'ny Tompo, amin'ny efitranon'i Gamariasa, zanak'i Safana, mpanoratra, teo amin'ny kianja ambony, anoloan'ny vavahady Vaovao amin'ny tranon'ny Tompo, mba ho ren'ny vahoaka rehetra. 11Nandre ny tenin'ny Tompo rehetra, tao amin'ny boky, Mikea, zanak'i Gamariasa, zanak'i Safana; 12ka dia nidina nankany an-tranon'ny mpanjaka, tao amin'ny efitranon'ny mpanoratra; ka indro fa nipetraka tao avokoa ny lehibe, dia Elisama, mpanoratra, Dalaiasa, zanak'i Semeiasa, Elinatana, zanak'i Akobora, Gamariasa, zanak'i Safana, Sedekiasa, sanak'i Hananiasa, mbamin'ny lehibe rehetra. 13Ary nambaran'i Mikea tamin'izy ireo avokoa, ny teny reny tamin'ny namakian'i Baròka azy tao amin'ny boky ho ren'ny sofin'ny vahoaka.
14Tamin'izay ireo lehibe rehetra, naniraka an'i Jodì, zanak'i Nataniasa, zanak'i Selemiasa, zanak'i Kosi, ho any amin'i Baròka, hilaza aminy hoe: Raiso ny horonan-taratasy, izay namakianao teny teo an-tsofin'ny vahoaka, ary mankanesa atý hianao. dia norasin'i Baròka zanak'i Nerià ilay horonan-taratasy ka nankany amin'izy ireo izy. 15Ary hoy ireo taminy: Mipetraha hianao ka vakio izany ho ren'ny sofinay. Dia namaky izany teo an-tsofin'izy ireo Baròka. 16Nony efa nandre izany teny rehetra izany izy ireo dia nifampijery tamin-tahotra, ka nanao tamin'i Baròka hoe: Tsy maintsy ambaranay amin'ny mpanjaka avokoa izany teny rehetra izany. 17Ary nanontany an'i Baròka izy ireo, nanao hoe: Lazao aminay izay nanoratanao izany teny rehetra izany avy tamin'ny vavany. 18Ka hoy Baròka taminy: Nanonona am-bava izany teny rehetra izany izy; ka nosoratako tao amin'ny boky, tamin'ny ranomainty. 19Dia hoy ireto lehibe tamin'i Baròka: Mandehana miery, hianao sy Jeremia, ka aoka tsy hisy olona hahalala izay misy anareo. 20Rehefa izany izy ireo, namela ilay horonan-taratasy tao amin'ny efitranon'i Elisama mpanoratra, dia niditra tao amin'ny mpanjaka, tao amin'ny kianja, sy nilaza teo an-tsofin'ny mpanjaka io raharaha rehetra io. 21Nirahin'ny mpanjaka Jodì haka ilay horonan-taratasy, dia noraisiny tao amin'ny efitranon'i Elisama, mpanoratra, dia novakiny teo an-tsofin'ny mpanjaka sy teo an-tsofin'ny lehibe rehetra nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. 22Ny mpanjaka izany nipetraka tao an'efitrano ririnina tamin'ny volana fahasivy; ary voarehitra afo teo anoloany ny fatana. 23Vao toko telo na efatra no voavakin'i Jodì, dia notapahan'ny mpanjaka tamin'ny antsipikan'ny mpanoratra, ilay taratasy, ka natsipiny tao anatin'ny afo tao am-patana, mandra-pahalevon'ny afo tao am-patana ny horonan-taratasy manontolo. 24Tsy mba natahotra na nandriatra ny fitafiana akory ny mpanjaka sy ireto mpanompony rehetra izay nandre izany teny rehetra izany. 25Efa nihanta mafy tamin'ny mpanjaka anefa Elnatana sy Dalaiasa, ary Gamariasa, mba tsy handoro ilay horonan-taratay; fa tsy nohenoiny izy ireo. 26Rahefa izany dia nodidian'ny mpanjaka Jermiely zanak'andriana, sy Saraiasa zanak'i Ezriely, ary Selemiasa zanak'i Abdeely, hisambotra an'i Baròka mpanoratra, sy Jeremia mpaminany, nefa nafenin'ny Tompo izy ireo.
27Ary natao tamin'i Jeremia ny tenin'ny Tompo, taorian'ny nandoran'ny mpanjaka ny horonan-taratasy, mbamin'ny teny nosoratan'i Baròka araka ny nanononan'i Jeremia avy, dia toy izao:
28Mandehana maka horonan-taratasy hafa indray hianao; ka soraty ao avokoa ireo teny voalohany, tao amin'ilay horonan-taratasy voalohany, nodoran'i Joakima, mpanjakan'i Jodà. 29Ary lazao amin'i Joakima mpanjakan'i Jodà, hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Hianao nandoro iny horonan-taratasy iny, sady nanao hoe: Ahoana no nanoratanao tamin'iny fa hoe ho avy tokoa ny mpanjakan'i Babilona, ka handrava ity tany ity, ary ataony tsy hisy olona na biby intsony eto. 30Noho izany, izao no lazain'ny Tompo, ny amin'i Joakima, mpanjakan'i Jodà: Tsy hisy amin'ny fianakaviany na iray aza hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, sady hatsipy any ivelany ny fatiny hasian'ny hainandro, amin'ny antoandro, sy ny hatsiaka amin'ny alina. 31Hafototro hamely azy mbamin'ny taranany sy ny mpanompony rehetra, ny helony; ary hataoko mihatra aminy, sy amin'ny mponina ao Jerosalema, ary amin'ny olona amin'i Jodà, ny loza rehetra nolazaiko taminy, fa tsy nohainoiny aho. 32Dia naka horonan-taratasy hafa indray Jeremia, natolony an'i Baròka mpanoratra, zanak'i Neriàsa, ka nosoratan'i Baròka araka ny nanononan'i Jeremia azy ny teny rehetra tamin'ilay boky nodoran'i Joakima mpanjakan'i Jodà tamin'ny afo; ary teny hafa maro tahaka ireny no niampy. >